Uthando, ubulili kanye ne-intanethi | I-Foundation Foundation
Ikhaya Uthando, ucansi kanye ne-Inthanethi
"Luyini uthando?" ingenye yamagama aseshwa kakhulu ku-inthanethi. Isiphetho seGrant Study, ucwaningo lweminyaka engama-75 eHarvard University, kwaba ukuthi "injabulo uthando". Kubonise ukuthi ubudlelwano obufudumele buyisisekelo esihle kakhulu sempilo, ingcebo nempilo ende. Ngokuphambene nalokho, ukulutheka, ukudangala kanye ne-neurosis yizithiyo ezinkulu kakhulu kulesi simo esifunwa kakhulu. Ukuqonda izingozi ezungeze ukusetshenziswa kwe-inthanethi kwe-porn kubalulekile uma sifuna ukugwema ukushelela ekubeni umlutha bese sithola ubuhlobo obunothando obenelisayo esikhundleni salokho. Ukubamba uthando, ubulili kanye ne-intanethi kubaluleke kakhulu.
Kulesi sigaba I-Reward Foundation ihlola izindlela eziningi abantu abahlanganyela kuzo zonke izimpilo zabo. Yini eyenza ubuhlobo busebenze? Ungaba kanjani othandweni futhi uhlale othandweni? Yiziphi izingibe ezingase zihambisane nawe?
Sigxila kwisayensi yobudlelwano obuyimpumelelo. Kwezinye izimo udinga ukubheka i-biology eyisisekelo kanye nesayensi yobuchopho ukuze konke kube nengqondo. Umphumela weCoolidge unamandla ikakhulukazi.
• Luyini uthando?
• Uthando njengokubambisana
• Ababhangqwana Bokubambisana Ababili
• Uthando njengesifiso sobulili
• Umphumela we-Coolidge
• Ukwehlisa isifiso sobulili
• Ezocansi Nezocansi